Imemory Lane - I-Brunswick Heads - I-Airbnb
Imemory Lane - I-Brunswick Heads
I-Memory Lane, embindini weBrunswick Heads, iza kuba yindawo epholileyo onokuzikhuphela kuyo ngempela-veki, phakathi evekini okanye ukuhlala ixesha elide.
Le ndawo yokuhlala isandul 'ukulungiswa kuyo yonke i- ngeenkcukacha zeempawu kunye nefenitshala ukuze ukhuthaze ukuphumla kwakho. I-Air con iyafumaneka.
Le ndawo ipholileyo yeholide ikufutshane neepaki umlambo kunye nolwandle, iikhefi, iivenkile kunye ne-cinema. Imizuzu eyi-35 ukusuka kwizikhululo zeenqwelo-moya. Ilungele izibini ezithandanayo, abantu abahamba bodwa, abantu abahamba ngezoshishino okanye intsapho encinci.
Izinto ezinkulu ezisandul 'ukulungiswa ziye zazisa ngemizobo emitsha kunye neebhodi ezipolishiweyo kwaye le flethi inenani elikhulayo lefenitshala ekhethekileyo ebizwa ngokuba bubuhle kunye nomtsalane we-esteryear, kodwa ngokulula nokusebenza kakuhle kwehlabathi lanamhlanje.
Kwigumbi lokuhlambela elisandul 'ukwenziwa uza kuziva uhlaziyekile kwaye usondele kwindalo kule ndawo ityebileyo eyenziwe ngendlela ekhethekileyo ngeplanga eliqinileyo nesitya sesandla esenziwe ngamatye omlambo iJavanese.
Uncedo olongezelelweyo lomatshini wokuhlamba impahla kunye nekhitshi elisebenza ngokupheleleyo lenza le ndawo ilungele ukuhlala ixesha elide.
Ukuba kukho umntu wesithathu okhethekileyo ebomini bakho, uza kufumanisa ukuba indawo yokuhlala ebhetyebhetye ingamnkela lula undwendwe olongezelelekileyo kuba isofa inokwenziwa ibe yibhedi enye.
Kukho iifeni zesilingi kwigumbi lokulala nakwindawo yokuphumla ukuze uphole ehlotyeni.
4.67 · Izimvo eziyi-205
IBrunswick Heads yidolophana encinci engaselwandle eneevenkile ezininzi zokutyela, ikofu esemagqabini kunye neevenkile eziphucukileyo kunye nezitena eziqhelekileyo. Unxweme, umlambo, ibhari, iipaki kunye nesitrato senza i-Bruns ibe yindawo efanelekileyo yokuya kwiholide.
Indawo yam ingaphambili lendlu ibe kukho enye iflethi okanye indlu ekwicomplex ngasemva. Iflethi yakho inegumbi lokuhlambela labucala nekhitshi elipheleleyo nendawo yakho yokungena ukuze indawo yakho yokuhlala ibe nemfihlo nokhuseleko. Ukuba unqwenela, ndifumaneka xa kukho nayiphi na imibuzo namacebiso okwenza ukuhlala kwakho konwabise.
Indawo yam ingaphambili lendlu ibe kukho enye iflethi okanye indlu ekwicomplex ngasemva. Iflethi yakho inegumbi lokuhlambela labucala nekhitshi elipheleleyo nendawo yakho yokungena…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-31975
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brunswick Heads